वैकल्पिक उपाय नखोजी सुखै छैन, गर्ने अरुले हैन शिक्षकले नै हो | EduKhabar
वैकल्पिक उपाय नखोजी सुखै छैन, गर्ने अरुले हैन शिक्षकले नै हो
सम्पादकीय नोट : कोभिड - १९ को संकट सँगै प्रविधि प्रयोगबाट शिक्षण गर्ने विषय जोडतोडले उठेको छ । विद्यालयमा ईण्टरनेटको पहुँच र आवश्यक भौतिक पुर्वाधार यसको मुख्य सर्त हो । यो भन्दा पहिले शिक्षण सिकाइका मुख्य कर्ता शिक्षकलाई सक्षम बनाउन वा उनीहरु सक्षम हुन जरुरी छ । तसर्थ बदलिदों शिक्षण शैलीका लागि के गर्न जरुरी छ ? के गर्न सक्छन् शिक्षकले ? भन्ने सवालमा संसारमा भईरहेका अभ्यास, देशमै अपनाईएको शैली र विषय विज्ञका धारणालाई सन्दर्भ अनुसार आलेख वा भिडियोका रुपमा प्रकाशन प्रशारण गर्ने गरी यो स्तम्भ शुरु गरिएको हो ।
त्यसो त शिक्षक समय अनुसार अपडेट हुनु जरुरी छ, अर्थात् शिक्षकको सक्षमता विद्यार्थीको सिकाइसँग अन्तर सम्बन्धित छ भन्ने वित्तिकै आरोप लगाएको रुपमा बुझ्ने शिक्षकको संख्या ठूलो छ । यही भिडमा केही शिक्षक विद्यमान चुनौती सामाना गर्दै शिक्षणमा केन्द्रित छन् । यस्तै मध्येका एक हुन् गोकुण्डेश्वर बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय, धनकुटा - ५ का गणित शिक्षक गोपाल राई, यो साता राईले अपनाएको शैली र अनुभव :
कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले धन, जन, शैक्षिक ,आर्थिक सबै क्षेत्रमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । अहिले संसार भर नै लकडाउनलाई यो रोक्नको लागि उत्तम उपायको रुपमा मानिएको छ । सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको डेढ महिना वितिसकेको हुन्थ्यो । तर, आज सम्म नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेबाट र कसरी शुरु हुने भन्ने यकिन भएको छैन । विद्यार्थी घरमै थुनिन वाध्य भएका छन् ।
विद्यालयमा सिक्ने ज्ञान, विद्यालय जाँदा, आउँदा गर्ने रमाइलो, साथीहरुसंग खेल्ने, उफ्रने कार्य एउटा बन्द कोठा वा सिमित क्षेत्रमा खुम्चिएको छ । यसबाटै बुझ्न सकिन्छ चञ्चल उमेरका बालबालिका कति सम्म कठिनाईमा दिन विताइरहेका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेबाट गणना गर्ने, कक्षा कहिलेबाट शुरु गर्ने भन्ने प्राविधिक पक्ष भए । यो हुँदै गर्ला । तर, बालबालिकाको सिक्ने उमेर त रोकिदैँन !
त्यसो हो भने कसरी सिकाउने त ?
अब विद्यार्थीलाई सिकाउनको लागि वैकल्पिक उपायहरुको खोजी नगरी सुखै छैन ।
हो, यो काम कठिन छ, हामी सँग पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र सीप पनि छैन । तर, यो संकटले हामीलाई सुचना प्रविधिका साधनहरुको उचित रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्थामा ल्याई पुर्याएको भने सत्य हो ।
शिक्षकहरु सिर्जनशील बन्ने समय आएको छ । अहिले विकसित देशहरुले विद्यार्थीलाई सिकाउनको लागि सजिलो हुने गरी विभिन्न एप्सहरु निर्माण गरेका छन् । ती मध्ये आफुलाई अनुकुल हुने एप्सको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
हाम्रा अघिल्तिर जुन प्रकारका प्रविधि छन्, साधन छन्, समय छ, जे छ त्यो बाट सिकाइ निरन्तरता नै आजको आवश्यकता हो । कतिपय ठाउँमा फोन मात्रै पनि हुन सक्ला, त्यहाँ अभिभावकलाई सम्पर्क गरेर सिकाइसँग जोड्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीको घरमै पनि पुग्न सकिएला ! जे सहज हुन्छ त्यो गर्न आवश्यक छ, यो गर्ने अरुले हैन शिक्षक ले नै हो ।
यही सोचेर मैले उपलब्धताका आधारमा केही कार्य अघि बढाएको छु । जुन अन्य ठाउामा पनि प्रयोग हुन सक्छ ।
मैले कक्षा दशका विद्यार्थीलाई गणित विषय सिकाउनको लागि दुइ वटा माध्यमहरुको अवलम्वन गरेको छु । पहिलो गुगुल क्यासरुमको प्रयोग गरेर उनीहरुलाई विषयवस्तुको स्क्यान इकपी र उत्तर पठाइदिन्छु । उनीहरुले समाधान गर्दछन् र नआएको भए पुनः इमेल मार्फत यति नम्वर प्रश्नको समाधान गर्न सकिएन भनी पठाउँछन् र समाधान गरी पुन: पठाउने गर्दछु । यो शिक्षक र विद्यार्थीबीचको इन्टरफेस हो ।
दोस्रो जुम एम्सको प्रयोग गरेर उनीहरुसंग लनलाइनमा कुरा गर्छु । उनीहरु एक अर्कामा देखिने साथै शिक्षक पनि देखिने हुनाले कक्षा कोठाको अनुभुति हुन्छ । एक आपसमा पनि कुरा गर्न पाउने साथै नआएको कुरा शिक्षकलाई सोध्दा सबैले सुन्ने र समाधान गर्दा पनि सबैले हेर्न पाउने भएकोले गर्दा वर्तमान अवस्थामा यो शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्तै उत्तम शिक्षण क्रियाकलाप संचालनको रुपमा लिन सकिन्छ ।
तर यसका केही चुनौती पनि छन् :
१. प्रमुख समस्या भनेको ईण्टरनेटको उपलब्धता नै हो । सबैको घरमा वाइफाइ जोडेको हुँदैन । मोवाइल भएता पनि वाइफाइ सुविधा नभए पछि सम्पर्क नै गर्न सकिदैन । वाइफाइ भएकोमा पनि कमजोर शक्ति भएको कारण राम्ररी सम्पर्क गर्न सकिदैन ।
२. सबै विद्यार्थीसंग मोवाइल फोन तथा ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटर नहुन सक्छ । आमा बाबु तथा दाजु दिदीहरुको मागेर चलाउनु पर्ने हुनाले भनेको अवस्थामा प्रयोग गर्न नपाउन सक्छन् ।
३. विद्युत आपुर्तिमा समस्या आइरहन्छ ।
४.सबै शिक्षकहरु प्रविधि प्रयोगमा अभ्यस्त नभएको वा रुची नभएको पाि हुन सक्छन् । हामी शिक्षकहरुलाई पनि यस्तो लामो समयसम्म लकडाउन हुन्छ भन्ने हेक्का कहिल्यै भएन र प्रविधि सिक्न ध्यान दिएनौं र विद्यार्थीलाई पनि मोवायल चलाउन सिकाएनौं, अब अहिले हामी दुवै उस्तै नै जस्तो भएका छौं । ज्ञान भनेको चाहेको बेलामा एकै पटक थुपारिएर हुँदैन । ज्ञान जहिले पनि क्रमशः अनि निरन्तर रुपमा सिकिने प्रक्रिया हो । तर , धन अकस्मात पनि प्राप्त भएर अत्यन्तै गरिव अत्यन्तै धनी बन्न जान्छ । ज्ञान त्यसो हुदैन ।
५. राज्यले दुरशिक्षाको नाममा उदाहरणीय तरिकाले कक्षा संचालन गर्न सकेन । यदि सकेको भए ती उपकरणहरुलाई तरुन्तै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो ।
उपाय के हुन सक्छ ?
१.विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई आफ्नै शिक्षक तथा सोही समाजका व्यक्तिहरुबाट सिकाउँदा मात्र बुझ्ने गर्दछन् । किन कि व्यक्तिहरुमा समाज अनुसारको बोली, शैली, प्रस्तुती गर्ने तरिका, शब्दको उच्चारण, उदाहरणको प्रस्तुती आदिमा फरक फरक हुन्छ । तसर्थ एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुमा साझा कार्यक्रम बनाएर एफ.एम. तथा विद्युतीय साधनको प्रयोग गरी शिक्षण गर्नु पर्छ ।
२.सरकारले ईण्टरनेट डाटा प्रदायकहरुलाई आवश्यक मात्रमा कर छुट गरिदिने साथै विद्यार्थीलाई सहुलिय रुपमा सस्तो डाटा उपलब्ध गराएर पनि नेट कनेक्सन गरी अध्ययनलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
३.वाइफाई सेवालाई केही निश्चित घरहरुको लागि छुटयाएर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
४.नेपाल सरकारले शैक्षिक एप्सहरु निर्माण गरेर निशुल्क रुपमा विद्यालय तथा स्थानीय निकायहरुमा प्रयोग गर्न दिनु पर्छ ।
५.कोरोना संक्रमित नभएको जिल्लाहरुमा अन्य जिल्लासंग नाका बन्द गरेर पनि विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
भनिन्छ संकट सँगै सामाधानको उपाय पनि आउँछ, तर त्यसलाई पहिचान गर्ने र तदनुरुप प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्ने मुख्य कुरा हो । कतिपय कुरा त गर्दै गए पछि सुधार हुँदे जाने पनि हुन्छन् । तर, केही छैन, केही गर्न सकिँदैन भनेर बस्नु भनेको शिक्षकले आफ्नो भूमिका विर्सनु मात्रै हैन बालबालिका माथि अन्याय पनि हो । तसर्थ जहाँ जे तरिकाले सकिन्छ सिकाइका लागि जुट्न ढिलो गर्न हुँदैन ।
राई, गोकुण्डेश्वर बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय, धनकुटा - ५ का गणित शिक्षक हुन् ।
प्रकाशित मिति २०७७ जेठ १२ ,सोमबार
jp parajuli1 year ago
कुरा ठिकै छ सर ।तर सरकारि बिद्यालयमा भएका बिद्यार्थी हरुकाे अबस्था नियाल्दा त केबल रेडयाे मात्र एक बिकल्प हाे जस्ताे लाग्दथ । अरुमा तत्काल अहिलेकाे अहिले पहुच पुग्न सक्ने अबस्था देखिदैन । बरु हामिले दुर शिक्षामा पनि रेडियाे शिक्षा काे क्षमता बढाउनु पर्दछ र मेसेन्जर ग्रुप नार्माण गरि केही हदसम्म छलफल गरि संवाद गर्न सकिन्छ बिद्यार्थी संग सर
माधब काफ्ले1 year ago
गुरुको बिचारलाइ सम्मान।सबैभन्दा पहिला अहिले यो बन्दाबन्दिमा बिध्यार्थि के चाहन्छन् पढाई को सबालमा त्यो गहिरिएर बुझ्नु पर्यो।म एक शिक्षककै नाताले के भन्न चाहन्छु भने सिकाइका सबालमा सिकारु तयार छ छैनन् कहिल्यै राम्ररी ध्यान पुर्याइएन।जबर्जस्ती परीक्षा केन्द्रित भएर पढाई थोपर्ने ,कोच्ने काम भयो।त्यसले गर्दा बिशेष गरेर सानै कक्षादेखि नै विद्यार्थी मा पढाई प्रती गम्भीर बितृस्ना पैदा भएको अवस्था छ।बिध्यार्थिमा आफैं खोज्ने सिक्न चाहने स्वभाव अपहरित बनाइयो।त्यसैले यो बन्दको अबस्था त्यो गुमेको पढाई प्रतिको स्वलगाब पुन फर्काउने ठुलो अबसर हो।त्यसैले पढाई लाई जबर्जस्ती कोच्न हतार नगर्वौ।शिक्षकले जबर्जस्ती कोचाएर एस इ इ जस्तामा धेरै पास गर्नुनै उत्कृष्ट शिक्षा हो,त्यै पास गराउने बिध्यालय र शिक्षकनै उत्कृष्ट हो भन्ने गलत धारणा हटाऔ।बिध्यार्थिले समाज,घरपरिवार ,अहिलेको यो बाताबरण बाट धेरै सिकिरहेका छन् भन्ने बुझौं ।कमसेकम पाथ्यपुस्तक सुरक्षित ढंगले बिध्यार्थिको हात हातमा पुर्याएर यो टर्मकालागी यति आफैं पढ,खोज ,नजानेको हामिलाइ सोध भनेर सबैभन्दा सर्बसुलभ मोबाइल फोन मार्फत बिध्यार्थी शिक्षक सम्बन्ध जोड्न सकिन्छ ।